Ny lalao fambolena efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny lalao tantsaha dia karazana nahazo laza be nandritra ny taona maro. Ampahany amin'ity laza ity ananany amin'ny Facebook izany, satria ao amin'ny tambajotra sosialy dia mahita lalao amin'ity lohahevitra ity izahay. Lalao izay nahavita nanantona mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao. Ho fanampin'izany, azo antoka fa mihoatra ny iray no mahatadidy ireo fanasana manelingelina.
Saingy, ity karazana ity dia nandao ny tambajotra sosialy. Ankehitriny, afaka mahita isika lalao fiompiana maro azo alaina amin'ny Android. Mandehandeha fotsiny mamaky ny Play Store hahita azy io. Noho izany, mamela anao eto ambany izahay a fifantenana ny tsara indrindra Inona no mety ho hitantsika
Amin'izany fomba izany, ho an'ireo rehetra liana amin'ity karazana lalao ity, mora kokoa ny fikarohana. Tsy mila mikaroka intsony ny lalao fiompiana rehetra misy Android ianao. Ireny miaraka amin'ireo lalao mendrika toerana eto amin'ity lisitra ity:
1 FarmVille 2: Fialofana ambanivohitra
2 Fambolena paradisa
3 Andro Hay!
4 Fiainana ao amin'ny fiompiana an-dranomasina
FarmVille 2: Fialofana ambanivohitra
Atombotsika amin'ny iray amin'ireo ny lisitra titre malaza indrindra, angamba ny malaza indrindra aza. Azo antoka fa ny ankamaroanareo mahalala ity lalao ity. Ho toy izany koa no hahafahantsika Miompy biby, manomàna fomba fahandro, mikaroha zavatra manokana ary hetsika hafa. Ho fanampin'izay, azontsika atao ny mamorona kaoperativa hivarotra ny sakafo rehetra. Mety miaraka amin'ny namana sy mpiara-monina izany.
Izy io koa dia manome antsika ny fahaizana hijinja ny vokatra ary afaka mampifanaraka ny fambolena isika amin'ny fotoana rehetra. Mety ho ny lalao kilasika sy tena ilaina indrindra amin'ny karazany. ny ampidino ity lalao ity ho an'ny Android Maimaimpoana. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Ao amin'ity lalao ity nifindra tany amin'ny paradisa tropikaly izahay aiza no hisy ny toeram-pambolenanay. Ka lalao fambolena manokana io. Ankoatry ny toeram-pambolainay manokana, manana nosy iray manontolo koa isika ho antsika. Fa ity nosy koa dia feno zava-miafina. Zavatra iray izay mahatonga ny lalao somary mampiala voly kokoa ary somary manalavitra ny lalan'ilay karazana.
Ankoatra izany, manome antsika ny safidy hampamolavola ny bibidia toy ny liona, zirafy na panda. Afaka mamorona spa ho antsika manokana eto amin'ity nosy ity ihany koa isika. ny maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na eo aza izany dia mahita fividianana isika.
Farm Farm: Lalao nosy ho an'ny zazavavy sy zazalahy
Developer: foranj - lalao fambolena sy trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny
Iray amin'ireo lohateny malaza indrindra ao anatin'ny lalao fiompiana. Lalao izay malaza be amin'ny Android ity. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy hikarakara ny toeram-piompiana izahay, ary koa hanao raharaham-barotra amin'ny namana sy mpiara-monina. Tokony hataontsika mitandrema manokana amin'ny voly sy biby. Ny lalao dia manome antsika ny safidy hanamboarana ny toeram-pambolena ary azontsika atao koa ny manitatra azy.
Ho fanampin'izany rehetra izany, manana ny trano heva misy azy izahay izay amidinay sy ividiananay vokatra miaraka amin'ireo mpilalao hafa. Mba handehanana lavitra kokoa, ny lalao dia manome antsika safidy manangana tanànantsika manokana ary mandray mpitsidika. Raha mpanaraka an'ity karazana genre sy simulateur ity ianao dia io no safidy tsara indrindra tokony hoheverina. Maimaimpoana ny fampidinana ny lalao amin'ny Android, na dia misy fividianana ao anatiny aza.
Fiainana ao amin'ny fiompiana an-dranomasina
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ity lalao ity. Izy io dia mety ho iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny lalao fiompiana. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy mifaninana amin'ny namana sy mpifanila trano isika hahitana hoe iza no tantsaha tsara indrindra. Manana hetsika maro izahay amin'ny fiompiana. Anisan'izany ny ny fikarakarana ny voly sy ny biby ary ny fivarotana ny voly hahazoana tombony. Famolavolana lalao Izy io dia iray amin'ireo lafiny misongadina indrindra, satria mampiavaka azy io.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia toy ny tamin'ny tranga teo aloha aza dia mahita fividianana ao anatiny isika.
Developer: Century Games Pte Ltd.
Ireo no ilay lalao fambolena efatra tsara indrindra izay ho hitantsika amin'izao fotoana izao amin'ny Android. Manantena izahay fa nahaliana anao ity fifantenana ity ary aza misalasala misintona ny tianao amin'ny findainao. Ahoana ny hevitrao momba ity lalao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao fambolena tsara indrindra ho an'ny Android
Ary Stardew Valley?
Valiny ho an'i Anonymus
Ny Honor 8 Pro dia manomboka manavao ny Android Oreo
Tarehimarika ofisialin'ny Facebook tamin'ny taona 2017